သွာသန့်ရှင်းရေး(ခေါ်) သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း (Dental Scaling) – D-Royal
သွာသန့်ရှင်းရေး ခေါ် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း (Dental Scaling)အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာကနေ နည်းစနစ်မှန် သွားတိုက်နည်းနဲ့ မတိုက်သောအခါ စားကြွင်းစားကျန်ဖြစ်ပီး တံထွေးကသတ္တုဓာတ်နှင့် ပေါင်းစပ်သွားသောအခါ သွားနှင့် သွားဖုံးပတ်လည်မှာ သွားချေးလွှာအနေနဲ့ ကပ်ကျန်နေတက်ပါသည်။
အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ သွားချေးလွှာကနေ မာကြောသော သွားချေးကျောက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
(2)သွားသန့်ရှင်းရေး ခေါ် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။❓❓❓
သွားသန့် ရှင်းရေး (Scaling) ဆိုတာ Ultrasonic Scalerဖြင့် သွားပေါ်မှာကပ်ညှိစေသော သွားချေးကျောက်များနှင့် အစွန်းအထင်းများကို တုန်ခါစေမှုဖြင့် ဖယ်ရှားစေသောကြောင့် သွားသန့်ရှင်းရေး ဘယ်၂ ခါလုပ်လုပ် သွားကိုပွန်းစေ၊ ပါးစေတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်စေပါဘူး ခင်ဗျာ။
(3)ဘယ်လိုအခြေအနေ မှာသွားကျောက်ခြစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ???
သွားကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် သွားတိုက်လျှင် သွေးထွက်ခြင်း၊ သွားဖုံးများနီပီး ရောင်နေခြင်း၊ သွားများယိုင်နဲ့လာခြင်း၊ ခံတွင်းမှအနံဆိုးများထွက်လာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်မှု အားနည်းလာခြင်း စသည့်လက္ခဏာများ ပေါ်လာလျှင် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်းကို ကုသသင့်ပါတယ်။
(4)မကုသပဲထားလျှင် ဘာဆိုးကျိုးတွေခံစားရမည်နည်း။ ???
အစပိုင်းတွင် သွားဖုံးများနီပြီး ရောင်လာပါတယ်။ အချိန်ကြာလာလျှင် သွားဖုံးများနိမ့်ကျပီး သွားအမြစ်ပိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
သွားအမြစ်ပိုင်းပေါ်တဲ့နေရာမှာ ရေခဲရေ၊ အအေးသောက်ရင် သွားတွေကျဉ်လာမယ်။ အစာတွေညပ်ပြီး သွားပိုးစားလာမယ် ။
ဒီထက် အခြေအနေဆိုးရွားရင် ရေစီးကမ်းပြိုအဆင့်ကို ကူးပြောင်းလာပါမယ်။
နောက်ဆုံး အခြေအနေနဲ့ သွားတွေယိုင်နဲ့ပြီး သွားတွေဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(5)သွားကျဲရခြင်းအရင်းတစ်ရပ်ကလည်း သွားကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာကို သင်သိပါသလား။
မကုသပဲထားပါက ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါဖြစ်လျှင် သွားမြစ်ပတ်လည် တစ်ရူးအစားထိုးကုသမှု လုပ်ပေးရသော ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ် လည်းလွန်စွာများ ပြားပါသည်။
မဖြစ်ခင်ကြို တင်ကာကွယ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ✅✅✅
ပုံမှန်အားဖြင့် မိမိသွားသန့်ရှင်းရေးကို သွားချေးကျောက်များရင် 6လ တစ်ခါ လုပ်ပေးသင့်ပြီး နည်းရင် ၁ နှစ် တစ်ခါ ပုံမှန် လုပ်ပေးသင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းတွင် တခါသုံးပစ္စည်းများနှင့် သွားကိရိယာများကို ပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့်အိတ် (Sterilisation Pouch) ထဲသို့ထ ည့်ပီး စနစ်တကျ ပိုးသတ် သန့်စင်ထားသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ လာရောက်ကုသနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Chat Box သို့မဟုတ် 09 979 005 387, 09 777 870 880ကို ဆက်သွယ်ပီး အချိန်မရွေး မေးမြန်းနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Address : အမှတ်(၅၀)၊ မြေညီထပ်၊ အလယ်ဘလောက် ဌာနာလမ်း၊နတ်စင်လမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ 099 7900 5387, 09 777 870 880 (one way ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ဌာနာလမ်း or နတ်စင်လမ်းမှ ပတ်ဝင်ပေးပါရန်)
ဆေးခန်းဖွင့်ချိန်- မနက်၁၀နာရီ- ည၈နာရီ